War Cusub Oo Ka Soo Kordhay Xasbi Gurigii Uu Ku Jiray Ronaldinho Ka Dib Markii Lagu Qabtay Baasaboor Been Abuur Ah - Gool24.Net
August 8, 2020 Saed Mohamed
Ronaldinho ayaa la filayaa in loo ogolaado inuu ku laabto dalkiisa Brazil maalinta Isniinta ka dib markii uu shan bilood ku jiray xabsi caadi ah oo ku yaala Paraguay iyo xabsi guri isla dalkaas ah.
Xiddigii hore ee Barcelona iyo AC Milan ayaa loo soo bandhigay inuu xuriyadiisa helayo islamarkaana uu ka badbaadayo in la maxkamadeeyo haddii uu bixiyo 100 kun doolar oo kaash ah ka dib markii lagu qabtay baasaboor been abuur ah.
Walaalkiis Roberto de Assis Moreira ayaa la filayaa in loo ogolaado inuu isna raaco diyaarada uu Ronaldinho ugu laabanayo Brazil haddii garsooraha uu aqbalo soo jeedinta xeer ilaalinta ah ee ah in lagu ganaaxo 120 kun doolar iyo xabsi labo sannadood ah oo hakad la gelinayo.
Labada nin waa inay qirtyaan inay galeen danbi ah inay wadanka ku soo galeen baasabooro been abuur ah sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka ku yaala Koonfur Ameerika.
Sii deynta Ronaldinho ayaa soo gabagabeyneysa shan bilood uu maxbuus ku ahaa Paraguay taasoo soo bilaabatay bishii Maarso markaasoo hal bil uu xabsi caadi ah ku qaatay ka hor inta aan loo ogolaanin inuu u wareego huteel weyn oo ku yaala caasimada isaga iyo walaalkiis iyagoo halkaas ku galay xabsi guri.
40 jirkaan ayaa shaaca ka qaaday wareysi ay la yeelatay wargeyska ABC Color dhamaadkii bishii April in waxa ugu horeeya ee uu sameyn doono marka la sii daayo inay tahay inuu dhunkan doono hooyadiis Miguelina.
Isla wargeyska ayaa sheegay in xeer ilaalinta ay weydiisatay garsoore Gustavo Amarilla inaan maxkamada lagu sii ceebeynin Ronaldinho islamarkaana walaalkiis ka weyn isna lagu xukumo xabsi hakad la gelinayo balse dhaqangeli doona haddii uu danbi kale ka galo wadanka.
Lacagta kaashka ah ee laga qaadayo labada walaal ayaa ah mid lagu tilmaamay inay ceymis ka bixinayaan dhaawacii ay u geysteen bulshada reer Uruguay madaama ay baal mareen sharciga.
ABC Color waxay sheegtay in Ronaldinho uu filan karo xabsi labo sannadood ah haddii qareenadiisa ay diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyayaasha.